Ụlọ ọrụ Dubai Maka Ọrụ Ọhụụ Na-achọ maka Ọrụ na UAE 🥇
Ụlọ Ọrụ Ọchịchị Dubai maka ndị na-achọ ọrụ n'ụwa
Dubai ọdụ ụgbọ elu ọrụ
Ọrụ ụgbọ elu Dubai, dịka eziokwu, bụrụ ezigbo ewu ewu. Karịsịa na Middle East. Ya mere, ma ọ bụrụ na ị na-achọ ezigbo ọnọdụ na Dubai. Ị ga-eche na ọdụ ụgbọ elu dịka ebe dị mma iji rụọ ọrụ na Dubai. Ịchọ na itinye maka ọrụ n'èzí na Dubai ọ ga-ewe oge gị. Ị nwere ike wepụta oge gị ma chọọ ebe ọhụụ ọhụrụ. Ma ọ bụ ile anya na anyị ndu maka ndị ọrụ maka Dubai companieslọ ọrụ ọdụ ụgbọ elu na-arụ ọrụ na Dubai. Otu n'ime ihe na-atọ ụtọ banyere Ọrụ ugbo elu na UAE. Bụ na ị nwere ike ịchọta ha nke ọma n'ịntanetị na ibe weebụ ha.
Maka ọtụtụ akụkụ, ọrụ ọchụchọ na UAE. Ekwesịrị iji ọkwa ihe ọmụma dị elu mee ya. Ọtụtụ n'ime ọdụ ụgbọ elu azụmahịa bụ ihe metụtara gọọmentị. N'aka nke ozo, inwere ike ihu oru ndi edobere na ulo ahia obodo na Dubai. Ma ọ bụ yana ọdụ ụgbọ elu alaka ụlọ akụ ndị na-akwụ ndị na-achọ ọrụ. Maka na ị ga-esi nweta ohere ndị gọọmentị na-achịkwa, n'eziokwu, na-eme mkpebi. Ịkwesịrị ịnye ọtụtụ akwụkwọ tupu ị nweta akwụkwọ ozi.
Otu n'ime ụlọ ọrụ kachasị mma bụ ego maka ụgbọ elu ọrụ bụ ụlọ ọrụ Emirates. Inwere ike inweta ọrụ na ọdụ ụgbọ elu Dubai. Citylọ ọrụ Dubai City nwere ugbu a mepụtara ntuziaka maka ndị na-achọ ọrụ ọrụ cryptocurrency. Na-ekwukarị gbasara ịchọta ọrụ na ụlọ ọrụ ọdụ ụgbọ elu. N'aka nke ozo, ichoro oru karia anyi Ntụziaka maka expats na Dubai. Ya mere, ị ga-agụrịrị ntụziaka na nduzi anyị maka Dubai na Abu Dhabi ọdụ ụgbọelu.
Ọrụ na ọdụ ụgbọelu na United Arab Emirates
Otu n'ime ihe na-adọrọ mmasị Isi ihe banyere ịchọ ọrụ gị na Dubai. Enwere ike ọ bụghị naanị Dubai na Abu Dhabi kamakwa ọ bụ Al ain, agwaetiti das, ọdụ ụgbọ elu Shariah. Enwere otutu ebe ị nwere ike, n'eziokwu, chọta ọrụ na 2018. Enwere ọdụ ụgbọ elu 22 na United Arab Emirates. Ebe ị nwere ike ịchọta ọrụ. You nwere ike ịga na ọdụ ụgbọ elu ndị dị n'ịntanetị n'ịntanetị. Shouldkwesịrị ịmalite, ụzọ ndị ọkachamara. Izipu CV gi na webusaiti anyi n’eenye. Gbalịa ịdebanye aha gị maka alerts ọrụ. Ga-akpachapụ anya enyere gị aka ịchọta ọrụ n'ụlọ ọrụ ọdụ ụgbọ elu.
Ọrụ ọdụ ụgbọ elu Dubai bụ otu n'ime isiokwu na-ekpo ọkụ na Middle East. Karịsịa maka ndị mbịambịa India na-akpọ oku n'etiti. Kwa afọ, enwere ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ emepụtara na ọdụ ụgbọ elu Dubai na Abu Dhabi. I nwere ike ịchọta ndepụta nke ọdụ ụgbọelu na Wikipedia. Imirikiti ndị na-etinye akwụkwọ iji nweta ụdị ọrụ a site na Pakistan na India. Ma anyị bụ na - ahụ ihe omume si na ndị ọrụ ndị India India. Ọzọkwa Saudi Arabia yana South Africa. Nyere isi okwu ndị a, ịnwere ike ịchọta ọrụ dịka osote ahịa, onye ọrụ ngbanwe ụbọchị, onye nlekọta, onye isi ahịa azụmaahịa. Ma ọ bụ ọbụna ọkwa ọkwa nchịkwa dị elu. N'ime ọdụ ụgbọ elu na Middle East.
Dubai Airport ọrụ ohere
Tinye ebe a maka Ọrụ na Dubai
Ọ dị mma, Ka anyị malite na ọdụ ụgbọ elu. Ị nwere ike ịnweta otu ọrụ kachasị mma na ụlọ ọrụ Dubai. Otu n'ime ebe kacha mma maka nwanyị na-achọpụta na Dubai. Airportgbọ elu ụgbọ elu Dubai na-ewe maka ọtụtụ ọrụ. Site na ọnọdụ ire ahịa rue isi nke ọrụ na UAE. Nwere ike ịchọ ọtụtụ ọrụ maka ọrụ ọdụ ụgbọ elu Dubai. Na ọdụ ụgbọ elu, ị nwere ike ịchọta site n'oge ruo n'oge na-agagharị na nyocha. Ya mere ọ bara uru ịgbaso usoro mgbasa ozi mgbasa ozi ha.
E hibere ọdụ ụgbọ elu ahụ na 30 Septemba 1960. Ọrụ ha bụ imepụta ọdụ ụgbọ elu na-edu ụwa. Karịsịa ndị njem ọhụrụ na-achọ ọrụ na saịtị ọrụ has maka ọdụ ụgbọ elu Dubai. N’aka nke ọzọ, njikwa na-ele anya ịkwalite ọganihu nke ndị si mba ọzọ. Karịsịa Maka ndị na - achọ ọrụ ọhụụ, ha na - ebili ọnọdụ ụwa nke Dubai. Ọrụ ha na azụmahịa Airport bụ ezigbo njem na-akpali akpali. Yabụ na ọ dị mma ịnweta ụdị ahụmịhe na ịmalitegharị gị.
N'ime oru 80% nke oru oru Dubai Airport bu ndi ndi mba ozo. Ndị ọrụ ọhụrụ ahụ na-abịa site na gburugburu ụwa. Ọmụmaatụ Ndị si mba Africa kwabatara, Ọzọkwa na ndị si India ghọọ ndị ọrụ na Airport Dubai. Nke ahụ pụtara na ị nwere ike ịmalite ịrụ ọrụ na ndị ọrụ mba ofesi na uche mba ụwa. Ikwu eziokwu gi na ugbo elu guests ga-enwe ọtụtụ ndị ọbịa mba ụwa. Na ọdụ ụgbọ elu Dubai ị nwere ike ịchọta ọrụ dị ka onye na-ere ahịa ma ọ bụ onye njikwa ọrụ.
Ọrụ dị n'ọdụ ụgbọ elu dị na Dubai kwesịrị ya?
Nwere ike ịchọta ozi niile gbasara mmeghe na webụsaịtị ha. A na-enweta ohere ọrụ ụlọ ọrụ ụgbọ elu Dubai ma jikwaa ọrụ Dubai International (DXB). Akụkụ azụmaahịa sokwa na Dubai World Central (DWC). Yabụ ọ bụrụ na ndị njikwa marala anya na-ahụ maka azụmaahịa a, ị ga-enwe ezigbo ohere maka ọrụ ogologo oge.
O doro anya na nke a bụ otu n'ime ebe kachasị mma iji nweta ọrụ. Na site n'ile anya na nyocha Google. Dubai Airport ọrụ dị oké ọnụ ahịa.
Tinye ebe a maka Ọrụ na Abu Dhabi International Airport
Weebụsaịtị nke ọdụ ụgbọ elu a na Abu Dhabi na-enye nhọrọ nhọrọ ịchọ ọrụ dị mma. Nwere ike mfe nweta nhọrọ na ọrụ niile. Ma lelee ọnọdụ ị nwere ike ịbanye na ya. Enwere m nnukwu mmasị na onye were gị n'ọrụ bụ na ọdụ ụgbọ elu dị na etiti Middle East. Ọdụ ọdụ ụgbọ elu dị mkpa ịghọta bụ na-ewe ndị na-achọ ọrụ n'obodo. Ọzọkwa, nke zuru ụwa ọnụ ndị na-achọ ọrụ na MBA.
Ọzọkwa, obodo Abu Dhabi bụ ebe azụmahịa zuru ụwa ọnụ maka azụmahịa na njem maka ndị mba ụwa. Abu Dhabi bụkwa ihe kacha mma ebe maka ndị mba India. Ọ bụrụ n’ikpebie ịkwaga n’otu n’ime obodo kachasị baa ọgaranya n’ụwa. Should kwesịrị ịtụle ọdụ ụgbọ elu a ezigbo ebe iji rụọ ọrụ. Ọzọkwa, o nwere ọdụ ụgbọ elu a, resili na akụ na ụba na-eto eto.
Al Bateen Executive Airport ikwu okwu n'ozuzu bu ihe raara onwe ya nye tumadi n’ebe ndi isi ahia nọ. Otu n'ime ebe kachasị mma ma ọ bụrụ na ịnwere ụgbọ elu ụgbọelu azụmahịa. Ebe ọdụ ụgbọ elu ahụ dị 6.5 nautical kilomita 12.0 km; 7.5 kilomita ndịda-ọwụwa anyanwụ nke etiti obodo Abu Dhabi na Abu Dhabi, na United Arab Emirates. Airportgbọ elu ọdụ ụgbọ mmiri dị na agwaetiti Abu Dhabi. Ọzọkwa, ị nwere ike ịchọta ọrụ na Middle East na onye ọrụ a.
Abugbọ elu mba Abu Dhabi nwekwara ndị na-esite na ọdụ ụgbọ elu akụ nke gọọmentị UAE. Ọnọdụ ndị ahụ ga-enyere gị aka chọta ọrụ ma rụọ ọrụ na VIP ụlọ ọrụ nlekọta ụlọ ọrụ na Abu Dhabi. N'ihi na nlekọta nke Ọdụ ụgbọ mmiri nwere ahụmahụ na-agbasawanye. Gọọmenti emeghewo ọdụ ụgbọ elu a na 1969. Otu n'ime ọdụ ụgbọ elu International Abu Dhabi kasị mma nke dochie ọdụ ụgbọ elu dị elu.
Tinye ebe a maka Ọrụ na Furajah International Airport
Ọdụ ụgbọ elu a bụ 1 mile mile 1.9; 1.2 kilomita n'ebe ndịda Fujairah. United Arab Emirates Department of Civil Aviation. Jide na ọdụ ụgbọ elu a ị pụghị n'ezie chọta oru na Dubai na visa. Ha na-ebutekarị maka mmepe azụmaahịa ọhụrụ. Ohere mepere na ịgbazinye FBO na Ọrụ VIP maka ndị ọchụnta ego. N’akụkụ dị mma, ị nwere ike ịchọ ọrụ ndị na-elekọta ụgbọelu.
N'akụkụ aka nke ọzọ, Ndi isi ndị na-agbada na ọdụ ụgbọ elu International Fujairah. Denye ebe a dika otu n'ime ihe kacha mma iji nweta ọmarịcha ahụmihe na Fujairah. Na otu n'ime ebe dị mma iji daa nwayọ na UAE. Otu n'ime ọdụ ụgbọ elu kacha mma ịchọta ọrụ na Dubai.
Ka ị na-efefe n’elu ugwu oke osimiri, ugwu were echiche gị n’uche gị. Fujairah International Airport, ọ bụ otu n'ime ebe maka ọrụ Ndị ọchịagha Pakistani. N'ihi na njikwa n'ọdụ ụgbọ elu nwere ndị ọrụ Pakistani. Na imirikiti n’ime ha na-arụzu nnukwu ọrụ. N'iburu nke a n'uche, anyị enyela ihe ozi niile dị mkpa maka expats. Ihe niile ị ga - eme bụ pịa weebụsaịtị. Anyị ebidola njem ụgbọ elu gị na Dubai.
Ọrụ na Ras Al Khaimah International Airport
Tinye ebe a maka Ọrụ na Ras Al Khaimah International Airport
Ebe ọzọ dị ịtụnanya ịchọta ọrụ Dubai Airport. O doro anya, ọ ga-abụ ọdụ ụgbọ mmiri Rak, ụlọ ọrụ na-enye ọrụ ohere n'ọtụtụ ọnọdụ. Jide n'aka na ị maara esi echekwa profaịlụ gị maka ndị ọrụ nchịkwa HR. Maka na ị ga-achọ ịmaliteghachi ịtụnanya. Ụlọ ọrụ anyị na-ekpochapụ ala nke a bụ ọdụ ụgbọelu kachasị mfe iji nweta ọrụ na United Arab Emirates.
Ọdụ mmiri Ras Al Khaimah nwere ohere maka nnukwu ndị ọpụpụ. Imirikiti ndị mmadụ na-arụ ọrụ n'ọdụ ụgbọ elu a bụ ndị India na ndị Arab mpaghara. Iji sonyere otu ndị Ras Al Khaimah International Airport ịchọrọ inwe ahụmịhe. Ị nwere ike chọta ọrụ na-atọ ụtọ n'ọdụ ụgbọ elu a. Thisgbọ elu gọọmentị a metụtara gọọmentị na-akwụ ndị ọrụ ụgwọ kwa ọnwa.
Ị nwere ike chọta ọnọdụ ndị metụtara ahịa n'ọdụ ụgbọ elu a. Ọrụ dị n’ọdụ ụgbọelu Dubai na-eweta abamuru zuru ezu. Ọzọkwa, ịnwere ike ịtụ anya nchịkọta dị elu na mgbe ị ghọrọ onye ọrụ ọhụrụ. Can nwere ike ịmalite ọzụzụ na-aga ebe a. Iji nweta gị ọrụ ị ga - achọ ọgwụ asap, mana iji were gị n'ọrụ ọ kwesiri ị nye ha oge. Maka ọrụ na RAK International Airport. I kwesiri izipu ha ozi na CV ka ha bia leta ha. Gbaa mbọ hụ iji gosipụta ahụmịhe ọrụ gị.
Ọrụ na Sharjah International Airport
Tinye ebe a maka Ọrụ na Shaịa International Airport
Njikwa Airport Sharjah (SAA) bụ nzukọ a ma ama. Njikwa nke ọdụ ụgbọ elu a dị njikere ijikwa Sharjah International Airport (SIA). Ụgbọ mmiri a dị ịtụnanya na-akwụ ụgwọ mba ọ bụla, ndị na-aga obodo na ndị gụsịrị akwụkwọ ọhụrụ maka ọzụzụ. Jiri ya ekwentị ma tinye CV emelitere gị na ha. Maka na ha bara uru n'ezie inweta ọrụ.
I kwesịkwara ilele anyị ama ndu ndu ebe ị nwere ike ịchọta ọrụ ederede. Karịsịa ụfọdụ onye njikwa izipu ọrụ ọhụrụ sitere na ọdụ ụgbọ elu Sharjah International. Ndị na - achọ ọrụ ọhụụ sitere na ụlọ ọrụ nwere ọkachamara na-akwaga Sharjah. Naanị n'ihi na Ọ dị ọnụ ala karịa Dubai na Abu Dhabi.
Dị ka ụzọ ma ọ bụrụ na ịchọrọ izute ndị si Qatar na Dubai ị kwesịrị inwe anya na ha ebe nrụọrụ weebụ. Imirikiti ndị ọrụ ha na-achọ inweta ọkwa dị elu nke ọrụ nchekwa na nkwekọrịta ogologo oge. Ọzọkwa, Ọ bụrụ na ị nwere mmasị ijere ndị ahịa ozi. Ka ijikwa ya ọkwa dị elu nke afọ ojuju ndị ahịa. Should kwesịrị ịtụle ọrụ ọdụ ụgbọ elu Dubai a.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịnapụta ngwaahịa ọrụ site na ngwa na Shariah. Imirikiti ndị na-achụ nta ọrụ na-aga n'ihu na mmemme mmemme maka mmebi. Ha na-enwerịrị otu n'ime mmemme kachasị mma maka Sistemụ Njikọ Ejikọtara ọnụ (IMS). Ebe ọzọ dị ịtụnanya ịchọta ụgbọ elu Dubai ọrụ.
Ọrụ nhazi ala na ọdụ ụgbọ mmiri Dubai
Tinye ebe a maka Ụlọ ọrụ dnata na-achọ ndị na-achụsasị
Enweghị ike ijikwa ọrụ na Airport Dubai n'enweghị dnata ụlọ ọrụ. Otu n'ime smartest ụzọ ịmalite na ịchọta ọrụ Dubai n'ọdụ ụgbọ elu. Site na gburugburu ụwa, site na India ruo Bangladesh. Ndị na-achọ ọrụ ọhụrụ na-achọ ọrụ n'etiti ọrụ ụlọ ọrụ ahụ na-enye. Thelọ ọrụ dnata iwere n'ọrụ ruo ọtụtụ ọnọdụ. Dịka ọmụmaatụ, inye nri, ọrụ njem, ibu na njikwa ala. Ọrụ ọdụ ụgbọ elu Dubai na-abụkarị mgbe niile mkpa nke ndị na-ahụ maka ala.
Ụlọ ọrụ a anaghị arụ ọrụ na Dubai. Ha na-achịkwa ibu n'ime mpaghara 6. Na ịrụ ọrụ nke ọma na mba 84. Ọmụmaatụ, na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ dị na Saudi Arabia na Qatar. Ha na-eje ozi na-anya ụgbọ elu 256 niile na Middle East na International. Nke a bụ nnukwu ụlọ ọrụ na maa ndị ọrụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị mba ụwa.
Na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ ụwa. Ebe ọ na-eje ozi 7.0 nde ndị njem kwa afọ bụ echiche dị mma. N'iburu nke a n'uche, ma ọ bụrụ na ị na-achọ ọrụ na Ọwara ịkwesịrị itinye maka ọnọdụ dnata zuru ụwa ọnụ. Na Middle East, ụlọ ọrụ ahụ na-arụ ọrụ gafee mba anọ. Usoro ọrụ ha gụnyere nnukwu isi ụlọ ọrụ na UAE. Dịkwa ka onye ọrụ maka ha, ị ga-arụsi ọrụ ike. N'ihi na ụlọ ọrụ ahụ kpuchiri ọtụtụ ọrụ maka ndị ahịa ha. Can nwere ike ịmalite ọrụ site na ibu ruo na nri ụgbọ elu na UAE.
Jos na Airport na UAE na Etihad Airways
Tinye ebe a maka Ọrụ na Etihad Airways
Etihad Airways ọ na - akpọkwa maka ọrụ Abu Dhabi na Dubai Airport. Ọzọkwa, gị na ụlọ ọrụ a nwere ike chọta ọrụ na Sharjah na UAE.
The Cabin Crew ọrụ. Ka anyị jiri nke ahụ malite. Ọrụ ya na Etihad Airways nọ n'ọnọdụ ahụ. N’ezie ị ga-ewega ụwa niile. Etihad Airways na-achọ ndị ọrụ ụgbọ mmiri ọhụrụ. Ha na - akpọta ndị na - achọ ọrụ zuru ụwa ọnụ. Ha bụ na-achọ ụmụ amaala obodo na ndị si mba ofesi bịa.
Ọrụ ụgbọelu na SFI. Otu n'ime ọrụ ụgbọ elu kacha mma. Etihad bidoro ọrụ ogologo oge gara aga. Plangbọ elu ndị a na-efefe ebe ndị agafe agafe 100 gafee Middle East. Dị ka ịmara na ha na-arụkwa ọrụ na Africa, Eshia, Australia, Europe na North & South America. Yabụ, nyochaa ọrụ ụgbọ elu dị na ọrụ ọdụ ụgbọ elu Dubai.
Ebube Etihad & Ọrụ Ọrụ. Eleghị anya ị maghị nke ahụ mana ha dị goro ndi Algerians. Mana ị nwere ike ịmalite ọrụ ị na-ebu ibu kemgbe na 2004. Ọzọkwa, Etihad Cargo bụ azụmaahịa na-eto ngwa ngwa nke Etihad Airways. Mainlylọ ọrụ ahụ ji ngalaba a rụọ ọrụ na ọdụ ụgbọ elu Abu Dhabi International. Ohaneze ikwu okwu bu ezigbo ngwọta maka ndị na-achọ ọrụ n'ụwa na Gulf. Ma ọ bụ ọ bụrụ na ị na-achọ ọrụ n'ofe ụwa. Ị ga-anwa gbalịa ịgbasa ọrụ netwọk ụwa na nke ọdụ ụgbọ mmiri.
Strategy & Planning Ọrụ Eti na Abu Dhabi Airport. Etihad etolite etolite na UAE. O doro anya na enweghi ike imezu ya n’enweghi mba ofesi. Dị ka onye na-ahụ maka ọrụ na nnweta, ị nwere ike ịmalite ọrụ dị ogologo ma ọ bụ obere oge. Otu ha na - ahazi network ha na - ejikwa ugbo elu nke 110 ugbo elu. Ọ bụ Etihad na-ahụ maka ebe ndị 110 na-aga. N'aka nke ozo, ha na ndi ha na ndi oru 500 na aru oru. Etihad na-ebuga ndị njem nde 14.3 nde mmadụ kwa afọ.
Ọrụ na Etihad Airways Dubai Airport bobs nwere ike ghara na-agwụ ike!.
Emirates Group maka Dubai Airport ọrụ
Tinye ebe a maka Ọrụ Ụlọ Ọrụ Emirates
Ndị na - eweta ọrụ kachasị ukwuu na mpaghara. Canchọta ọrụ Dubai na ọdụ ụgbọ elu nwere ike ịme ngwa ngwa. N'ezie na Ndi otu Emirates. Ndị ọrụ Emirates Group na-arụ ọrụ karịrị mba 160. N'oge a, ụlọ ọrụ bụ nzukọ zuru ụwa ọnụ. Ọrụ ndị India, Africa, na Europe. Nlekọta nke ụlọ ọrụ ahụ. Kachasị anya na-achọ ndị ọkachamara nwere nkà. Ya na ndi mmadu enwere ike igba oru na kọntinenti obula.
Ulo oru nke ndi Emirate bu ulo oru ndi nwe obodo. Ụlọ ọrụ ahụ na-achọ ịrụ ọrụ na ụlọ ọrụ kasị mma na US na Europe. Dị ka ị gaa Dubai na Abu Dhabi maka ọrụ. You nwere ike ịhụ itinye ego na-eto eto na azụmaahịa. Grouptù Emirates Emirates tinyekwara nde mmadụ na akụrụngwa ọhụụ na ọzụzụ ndị ọrụ. Ụlọ ọrụ ahụ mere ihe di iche na mpaghara Middle East. Ọ bụrụ n’inweta ihe ịga nke ọma isonye na Emirates Group maka ọrụ ọdụ ụgbọ elu Dubai. N’ezie, ndị otu njikwa ga na-ele anya ka mụ na gị rụọ ọrụ.
N'ikpeazụ, ọ bụrụ na ị họọrọ ọrụ ị ga-abụ nwere mmasị ịmalite ịrụ ọrụ na Dubai. Ndị otu Emirates na-enye nnukwu ọrụ na ụlọ ọrụ ụgbọ elu. Ndị Emirates na-enye ngwanrọ ngụkọta maka ndị ọrụ ha. Ọzọkwa, iji nyere gị aka ịmalite ha na-agbakwunye ezigbo uru ngwugwu. Na mma nso nke ohere maka ndị na - achọ ọrụ zuru ụwa ọnụ. Ndị otu Emirates na-ekwu maka ịchụ onyinye dịgasị iche iche. Na ebumnuche a inweta ọrụ dịka ọrụ ndị ahịa ma ọ bụ ndị ọrụ ibu.
Jide ohere ma hụ na njikwa. Na ị bụghị onye na-egbu mmadụ. N'ihi nzube nke ọrụ na-adọta uche nke onye ọrụ njikwa. Ma site na otu aka na-ejide onwe gị. Mgbe ahụ bụrụ onye ọrụ nwere nkà nwere obi ụtọ n'ime ọdụ ụgbọ mmiri Dubai akpakanamde ụlọ ọrụ. Nwere ike hoo haa ịga n’ihu Emirates Group nke ọma.
Ọrụ na Marhaba maka Dubai Airport ọrụ
Akụkụ nke ụlọ ọrụ Emirate Group. N’akụkụ dị mma, ọ bara uru iziga CV gị. Karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-achọ ịchọta ọrụ Dubai na ọdụ ụgbọ elu. Ndị otu Marhaba mejuputara ijikwa karịa ndị ọrụ 600. Site na ọrụ ahọpụtara ndị si Pakistan na India si mba ọzọ kwaga ụmụ nwanyị. Companylọ ọrụ ahụ na-anọchite anya azụmaahịa ihe karịrị mba na asụsụ 50.
Companylọ ọrụ Marhaba, na ntụle, bụ ọkachamara na-elekọta ndị njem. Site n'akụkụ ụwa niile. Mgbe gị na ha ga-arụ ọrụ. Willkwesiri iji hụ na njem nke ọdụ ụgbọ elu na ụlọ azụmahịa Making na-ejide n'aka.all dị ka o kwere mee. Otu n'ime ụlọ ọrụ kachasị mma na-arụ ọrụ dị ka nwanyị si mba ọzọ na Dubai.
Ọrụ na Transguard Group
Tinye ebe a maka Ọrụ Dubai na Airport na Transguard Nche
Nlekọta anya na ụlọ ọrụ nchekwa. Ọzọkwa akụkụ nke ìgwè Emirates. N'akụkụ dị mma, ị nwere ike itinye akwụkwọ site na webụsaịtị ha. Translọ ọrụ Trans Nche na-achọkarị ndị mmadụ nwere nnukwu mmụọ. Iji kwu eziokwu ndị ọhụrụ na-achọ ọrụ na-achọta ọrụ soro ha. Ọrụ ndị a ọ bụ naanị maka ndị mmadụ na-arụ ọrụ ike. N'elu nke a, i kwesiri ile anya di nma. N'ihi na onye nche kwesịrị ịdị ka ọ dị ugbu a.
Ụlọ ọrụ ahụ na-achọ ịlele ndị ọrụ dị mma. N'akụkụ ndị na-adịghị mma, aghaghị inwe ezigbo nkà na ederede Bekee. N'ebe dị mma, ụlọ ọrụ ahụ na-atụ anya ịkwalite ọrụ ha. Ha nwedịrị ike isonye n'òtù ọrụ. Ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ ọtụtụ ọrụ na-enye na Monster mkpokọta. Ya mere, ọ ga-abụ echiche dị oke mma ile anya n'ebe ahụ.
Dubai Airport ọrụ Freezone
Companylọ ọrụ Dubai City na-ede banyere ịrụ ọrụ na ọdụ ụgbọ elu Dubai. Anyị kwesịrị ịkọ oge a ọrụ ndị ọrụ Freezone. Maka ụlọ ọrụ a akụ kachasị ukwuu bụ ndị ọrụ aka ọrụ. Ebumnuche nke mpaghara Dubai n'efu bụ iji wuo netwọsụ pụrụ iche. Mgbe Ha na-anata UAE. Ọchịchị ọhụrụ ahụ na-akwado onye ọ bụla so n'òtù ahụ mgbe niile. Iso ndị ọrụ na-eguzosi ike n'ihe ma na-arụpụta ọrụ bụ ihe obi ụtọ.
Ọ dị mkpa ka a họpụta ndị chọrọ ka a họpụta ndị ọhụrụ. Ndị otu ụgbọ elu Dubai na-arụ ọrụ. Kpachapụ anya ga-amụta ma zụlite n’ime ọkwa ụlọ ọrụ. Dika okwuru, ndi isi ulo oru a. Different dị iche na ndị ọzọ n'ihi na ọ na-amata ezigbo ndị na - eme ihe ngosi. Ọ bụ ezie na nke a nwere ike ịbụ ezigbo inye onyinye maka mmezu.
Nchikota maka oru oru Dubai Airport
Ịchọta Dubai Jobs na Airports na-ewe oge. Site gburugburu ụwa, ndị ọpụpụ na-akwaga Dubai n'ọdụ ụgbọ elu. Enwere ọtụtụ ụlọ ọrụ, ga-adị maka ọrụ expo na 2020. Enwere ọtụtụ ihe omume, ụlọ ahịa, ihe omume ebe ị nwere ike ịchọta ọrụ.
Mgbe izipu ngwa gị na saịtị ọrụ anyị nyere. Inwere ike ịbịa ebe ị ga-amalite ọrụ ị na-arụ na ọdụ ụgbọ elu Dubai. Ma ịchọrọ ịrụ ọrụ gburugburu ebe obibi dịka okomoko ntụ oyi. Ma ọ bụ nnukwu ọrụ dị n'èzí, enwere ọtụtụ ọrụ na ọdụ ụgbọ elu. N'iburu nke a n'uche, ị nwere ike ịnụ ụtọ ọ enjoyụ Ụzọ ndụ Dubai.
Otu n'ime ebe ịkwesịrị ịlele maka ọrụ na UAE. Enwere ụgbọ ala metro dị ọnụ ala ebe ị nwere ike inweta ọrụ. Can nwere ike ịmalite dị ka ọkwọ ụgbọ ala tagzi. Buru n’uche na ọnwa ụfọdụ dị oke ọkụ ịgagharị na Abu Dhabi ma ọ bụ Dubai. Ruo ugbu a, họrọ otu n'ime ọtụtụ ụzọ ọrụ maka ndị si mba ọzọ. Citylọ ọrụ Dubai City na-atụ anya ka ị nwee chi ọma na ọrụ gị n'ime ọdụ ụgbọ elu Dubai.